Naadiga Baadhayaasha | Waxbarshada Beesha Minnetonka
Warbixinta Guddiga Dugsiga 2021
Sahamiyayaashu waxay siinayaan xanaanada carruurta da'da dugsiga ah ee fasalada K-5 iyo Junior Explorers waxay siinayaan xanaanada carruurta ee iskuulka ka hor carruurta da'doodu udhaxeyso 3 - 5. Basaasiin Da'da Iskuulka ah waxaa lasiiyaa kahor iyo kadib iskuulka iyo maalmaha aan iskoolka aheyn. Sahamiyayaal Yaryar waxay bixiyaan xanaano maalmeedka oo dhan laga bilaabo 6:30 subaxnimo - 6:00 galabnimo
Xilliga xagaaga, daryeelka carruurta waxaa la siiyaa carruur 4 sano jir ah iyada oo loo marayo soo socda fasalka 5 th. Waxaan taageernaa qoysaska waxaanan ka caawinaa carruurta inay horumariyaan sida ugu macquulsan bulsho ahaan, shucuur ahaan, jir ahaan iyo caqli ahaanba.
Sii jawi aamin ah oo carruurta lagu dhiirrigeliyo inay ku mashquuliyaan danahooda, yeeshaan saaxiibtinimo, kuna koraan kalsoonida, madaxbannaanida iyo ixtiraamka naftooda iyo kuwa kale.
Sii fursad ay caruurtu ku dhisaan xiriir wanaagsan oo kobciya dadka waaweyn ee aaminka ah.
U abuur carruurta fursado ay wax ku bartaan kuna ku sahamiyaan ciyaarta.
Isqoristu waa marka ugu horeysa ee la imaado, oo marka hore lagu saleeyo. Inta lagu jiro sanad dugsiyeedka, isqorista ugu yar waa 3 maalmood usbuucii (maalmaha lama beddeli karo usbuuc ilaa toddobaad). Inta lagu jiro barnaamijka xagaaga, isqorista ugu yar waa 10 maalmood xagaaga oo dhan.
Ka baro wax badan oo ku saabsan K-5 Sahamiyeyaasha
Waxbadan ka baro Baadhayaasha Yaryar
Sahamiyayaal Yar iyo Baadhayaal ah waa barnaamijyo daryeel carruur oo tayo sare leh oo loogu talagalay carruurta, da'doodu tahay saddex illaa fasalka shanaad (sannad dugsiyeedka) iyo da'da 4 illaa fasalka shanaad (xagaaga). Baadhayaasha, waxaan siineynaa carruurta fursado ay wax ku bartaan iyadoo loo marayo nashaadaadyo badan oo kala duwan sida farshaxanka, muusikada, mashaariicda sayniska, cayaaraha, qorista, akhriska, farshaxanka, ciyaarta banaanka, kombiyuutarada, ku dhaqanka xirfadaha bulshada, waqtiga jimicsiga, ciyaarta riwaayadaha, iyo wax badan ! Waxaa jira isku dheelitirnaan xulashooyinka waxqabadyada oo ay ku jiraan koox ballaaran, koox yar, iyo xulashooyin shaqsiyeed.
Barnaamijyada Baahiyaha Waxbarshada ee Beesha Minnetonka waa 4-Xiddig oo ay Qiimeeyeen Hay'adaha Daryeelka Carruurta ee Minnesota .
goobta sanad dugsiyeedka Xiriirada
Dugsiga Kahor: 6:30 - 8:40 am
Dugsiga Kadib: 3:20 - 6 pm
Kahor Iskuulka: 6:30 - 8 am
Dugsiga Kadib: 2:40 - 6 pm
Xarunta Waxbarshada Beesha ee Minnetonka
Sarah Davis iyo Brenda Broveleit
Barnaamijka Xannaanada / Xanaanada: 6:30 am - 6 pm
Maareeyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Isuduwaha Barnaamijyada Dhalinyarada
Biilasha & Diiwaangelinta Baarayaasha
macluumaadka xiritaanka cimilada jiilaalka
Baadhayaasha K-5: Fadlan la soco in canug kasta laga qaado $ 75 lacag diiwaangelin ah, taas oo aan la soo celin karin.
Baarayaasha Xagaaga: Fadlan la soco in canug walba laga qaado $ 50 diiwaangelin ah, oo aan la soo celin karin.
Sahamiyayaal Yaryar: Fadlan la soco inay jiraan $ 200 khidmad laga rabo waqtiga oggolaanshaha diiwaangelinta. $ 100 ee khidmadani waa khidmad diiwaangelin aan la soo celin karin. $ 100 ee soo hartay waa dhigaal daryeel oo lagu dabaqi doono biilkaaga bilaha ugu horreeya deyn ahaan.
Saacadaha: 6:30 am-6 pm maalmaha shaqada
Xiriirro Dheeraad ah oo Dugsiga ah